Apple yakamhan'arira zvakare kutyora mbiri mbiri dzine chekuita neBluetooth | IPhone nhau
Apple yakamhan'arira zvakare kutyora mbiri mbiri dzine chekuita neBluetooth
Mazuva mashoma apfuura, takakuzivisa iwe nezve vanoti Apple yakazorasika uye izvozvo yakanga yabhadharira iyo Cupertino-based kambani inoda kusvika madhora mazana mashanu emadhora yezvibvumirano zvine chekuita neFaceTime uye iyo Messages application. Nhasi tiri kutaura nezve chitsva chikumbiro chakagamuchirwa kumahofisi eCupertino.
Tiri kutaura nezve kambani Rembrandt Wireless Technologies, kambani yakamhan'arira Apple kudare reTexas, kwairi kupomera Apple kuti infring patent mbiri muzita rake inoenderana nehunyanzvi hwebluetooth. Sekureva kwekambani iyi, patents dzakakanganiswa i8.457.228 uye 8.023.580.
Mumatare, Rembrandt anoti zvese zvigadzirwa zveApple zvinotsigira bluetooth 2.0 kana kumusoro neEDR (Enhanced Data Transmission Rate) kusanganisira iPhone 3GS uye gare gare, pamwe neese iPad uye Apple Watch mhando, akasiyana Mac mamodheru uye iyo HomePod inoputsa patent 8.457.228 uye 8.023.580. EDR tekinoroji inobvumidza kumhanyisa dhata kumhanya kuburikidza nerudzi urwu rwekubatanidza nenzira inokurumidza.
Aya maratendi anotsanangura nzira dzekutaurirana dzisina waya dzinoita sedzine hukama neEDRR tekinoroji tekinoroji, saka izvo zvinofungidzirwa kutyorwa zvinogona kuwedzera kune chero chishandiso chine tekinoroji iyi. Chaizvoizvo iyi imwe dare akaraira Samsung kubhadhara kambani iyi mamirioni gumi nerimwe emadhora pama patent maviri aya, saka zvinonyanya kuitika kuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika kuna Apple.
Kunyangwe Rembrandt parizvino asiri wega maridzi, akapera musi waZvita 4, kambani inotaura kuti iwe uchiri nekodzero yekubhadhara mari yekukuvara yekutyorwa kweApple pasati papera patents.
Panyaya yeSamsung, anga ari mutongi akaverenga huwandu hwese kuti huripwe. Rembrandt futi ndakumbira kutongwa kwedare kuti izvi zvive pamusoro pekutara huwandu uhwo Apple ichafanira kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple yakamhan'arira zvakare kutyora mbiri mbiri dzine chekuita neBluetooth
Mushure memhedzisiro yakaipa yaApple, zvinoita sekunge yakaipisisa haisati yauya ...